बालेनले काठमाडौं महानगरको नीति,कार्यक्रम कस्ता ल्याए ? यस्ता छन् आकर्षणहरु- – NamoBuddha Khabar
बालेनले काठमाडौं महानगरको नीति,कार्यक्रम कस्ता ल्याए ? यस्ता छन् आकर्षणहरु-
आइतबार, आषाढ ०५, २०७९ | २१:३१:४३ |
आफ्ना प्रतिवद्धता र एमालेको घोषणा पत्रको संयोजन
काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ औं नगरसभा बैठकमार्फत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि नीति,कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र(बालेन) शाहले निर्वाचनका बेला जनाएका अधिकांश प्रतिवद्धताहरु नीति,कार्यक्रममा समावेश गरेका छन् ।
मेट्रो रेल, घरभाडा निजी कम्पनीबाट, स्वास्थ्य बीमालगायतका कार्यक्रम उनको घोषणापत्र बाहिरका छन्। केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। घोषणापत्रमा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी नेपालभाषामा पढाउने विषय निरन्तरता दिएका छन्।
उनले आफ्नो प्रतिबद्धताबाहेक एमालेका घोषणापत्रमा भएका केही विषय समेटेका छन्।
उनले काठमाडौंलाई व्यवस्थित गर्ने, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनलाई विस्तार गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेजस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन्। यिनै नीतिलाई आधार बनाएर यहि असार १० गतेसम्म बजेट सार्जजनिक गर्ने तयारीमा महानगर नेतृत्व रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य आकर्षण
महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा सुधार योजना तर्जुमा गर्ने भएको छ। विद्यालय तह पूरा गर्दा कम्तीमा एउटा सीपमा स्वरोजगार हुनसक्ने जनशक्ति तयार पर्ने भएको छ। निजी विद्यालयहरुको शुल्क पुनरवलोकन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ।
दरबार हाइस्कुललाई राष्ट्रिय स्तरको नमूना विद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्ने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख रहेको छ। आवासीय संस्थागत विद्यालयमा कम्तीमा १ जना चिकित्सकको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख रहेको छ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच अभिवृद्धि गर्न महानगर जनस्वास्थ्य ऐन जारी गर्ने भएको छ। महानगरपालिकामा कर तिरेका करदाताहरुको स्वास्थ्य बिमा गर्न आबश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। बीमा शुल्कको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। एक विद्यालय एक नर्स र स्कुल सोसियल वर्कर कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्दै लगिनेछ।
एक वर्षभित्रमा महानगरक्षेत्रभित्र रहेका सडक, ढल, खानेपानी पाइपलाइन, सडक बत्ती, टेलिफोन लगायतका सबै भौतिक पूर्वाधारहरुको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी एकीकृत विवरण सङ्कलन गर्ने भएको छ। हाल संचालनमा रहेको पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवालाई विस्तार गरी निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि आबश्यक उपकरण तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पैदलयात्रीहरुको सहज आवागमनका लागि फुटपाथको स्तरोन्नति, बसस्टपहरुमा यात्रीहरुको विश्रामका लागि परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका बिद्युत, टेलिफोन, केवल टेलिभिजन, इन्टरनेट लगायतका तारहरु भूमिगत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख रहेको छ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सार्बजनिक शौचालयहरु संचालन तथा व्यवस्थापन गरी शौचालयको सुविधामा नागरिकको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको परिसरमा रहेको खाली जग्गामा पानी पुनर्भरणका लागि पोखरीको निर्माण गर्ने र बोरिङ्ग गरी आएको स्थानमा रिभर्स बोरिङ्ग गर्ने नीति ल्याएको छ।
साविकमा महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको वडा नं ११ स्थित भवनको प्रवलिकरण गर्ने, तिनकुनेको जग्गा बिबाद सामधान गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि संघिय सरकारसगं समन्वय गरी गर्ने र काठमाडौँ उपत्यकाको मेट्रो स्थापानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारी तथा अन्य निकयाहरुसंग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ।
यातायातलाई व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्र र अन्य नगरपालिका समेतको लगानीमा उपत्यका भित्र संचालनमा रहेका सार्बजनिक सवारी साधानमा जीपीएस ट्रकिङ सिस्टम सहितको सिसिटिभी जडान गर्ने छ। यात्रुहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट सवारी भाडा तिर्ने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्ने उल्लेख रहेको छ।
भर्टिकल पार्किङ निर्माणकालागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख रहेको छ। खुल्ला मञ्चमा रिभर्स बोरिङ सहितको भूमिगत पार्किङका लागि पूर्वधार निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ।
संस्कृति सम्पदा तथा पर्यटनसंग सम्बन्धी नीतिमा बिश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत पशुपती, बौद्ध, स्वयम्भू र बसन्तपुर क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। स्वयम्भू र बौद्धको ब्यबस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत ल्याउन पहल गर्ने छ।
सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन एक छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी उपत्यकाभित्रका सबै सार्वजनिक यातायातलाई एउटै छातामुनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। फुटपाथमा पसल राख्ने कार्यलाई निषेध गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ।
महानगरक्षेत्रभित्र मनाइने जात्रा,पर्व, मेला, पूजा, परम्परागत जीवनशैली एवं अन्य सांस्कृतिक सम्पदाहरुको मुख्य परिचयात्मक विवरण समेटी काठमाडौं महानगरको सांस्कृतिक प्रोफाइल बनाउने भएको छ। प्राचिन सभ्यताको धरोहरको रुपमा रहेको हाँडीगाउँ क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पदा पुनरुद्धार गर्दै होमस्टे सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।
नेवाः समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्न पहल गर्ने व्यवस्था नीति लिएको छ। काठमाडौँमा संचालन हुने बिभिन्न जात्रा, पर्वहरुलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा परिचित गराई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेछ। फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्रोतमा नै वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
महानगरको सेवालाई चुस्त बनाउन सिसिटिभी जडान गर्ने छ। हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष संवाद कार्यत्रम सञ्चालमा ल्याएने भएको छ। एक वर्षभित्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रथम आवधिक योजना २०७९–२०८४ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
महानगर क्षेत्रभित्र घरजग्गा र जग्गा बहालमा लिने दिने कार्यलाई कम्पनीमार्फत व्यवस्थित गर्न आबश्यक प्रबन्ध मिलाइने कार्यक्रम रहेको छ।
७० वर्ष नाघेका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकहरुको घरमा गई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ७० वर्ष नाघेका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिहरुलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी नेपाल सरकारले तोकेका औषधिहरु निःशुल्क उपल्ब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गर्ने भएको छ।